Kwifektri yoKhuseleko loMlilo, abaXhasi-baseTshayina abaKhuseli boKhuseleko loMlilo
Yobhedu ngumfanekiswana ezijikajika ring Ring kwendawo yokuhlala for Copper Tube
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, ii-hanger zethu ezixhonyiweyo zokujija ubhedu zifumene ukuthandwa okukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwaye zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Nail-e uqinisa kunye ngerabha
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, izikhonkwane zethu zekhonkrithi zerabha zisetyenziselwa ukukhwela imibhobho ezindongeni, iisilingi nakwimigangatho. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi iYurophu, Middle East naseAsia. Kwakhona umphezulu woqhakamshelwano wesangqa esingezantsi nesezantsi sineeplastiki ezimbini ngaphakathi.
Komoya Steel Pipe uqinisa kunye EPDM ngerabha Lining
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iipayipi zethu zentsimbi zokungenisa umoya kunye ne-EPDM yerabha yenzelwe ukuba zenziwe ngocingo olunamalungu amabini anezitshixo ezimbini zokutshixa. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi iYurophu neAsia. Kwakhona, i-EPDM yerabha yelinen isetyenziselwa ingxolo.
I-UL kunye ne-FM edweliswe kwiNdawo yokuHanjiswa kweNdawo eneeFelt
Njengenye yezona ndawo zixhomekeke kakhulu kukhuphiswano lwenkampani, iihenjisi zethu ezijikelezayo zeringi enezixhobo zokuziva zivaliwe yi-UL & FM evunyiweyo. Bafumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.